Diyaaraddii Khaaska Ahayd Ee Xiddiga Reer Brazil Ee Neymar Oo Lagu Qasbay In Ay Si Degdeg Ah U Fadhiisato
HomeWararka CiyaarahaDiyaaraddii khaaska ahayd ee xiddiga reer Brazil ee Neymar oo lagu qasbay in ay si degdeg ah u fadhiisato
June 21, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Diyaaraddii khaaska ahayd ee xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa lagu qasbay in ay si degdeg ah u fadhiisato waxyar kaddib markii ay ka kacday jiiradda Barbados.
Subaxnimadii hore ee saaka ayay diyaaraddu ka duushay Barbados iyada oo kusii jeedda Brazil, hase yeeshee waxa si degdeg ah ay ugu degtay woqooyi bari oo waddanka Brazil ah, kaddib markii ay ku timid cillad aan la sheegin waxa ay tahay, waxaana illaa hadda kasoo baxaya warar kala duwan.
Diyaaraddan oo uu iska leeyahay xiddia ugu qaalisan dunida ayaa si nabadqab ah ku degtay iyadoo aanay wax dhibaato ah soo gaadhin, hase yeeshee waxa aan wali la kala caddaynin uu Neymar saarnaa iyo in kale, waxaana wali jira walaac la xidhiidha.
Neymar ayaa mar hore waxa uu bartiisa bulshada soo dhigay sawir ay ku sugan yihiin garoonka diyaaraha isaga iyo walaashii Rafaella, waxyar kaddibna waxa uu soo dhigay sawir kale oo uu ku sugan yahay gudaha diyaaradda iyaga oo kasoo noqday fasax ay ku joogeen waddanka Maraykanka.
Neymar, saaxiibaddii Bruna Biancardi iyo walaashii Rafaella ayaa horraantii toddobaadkan waxay ku sugnaayeen xeebaha Miami ee waddanka Maraykanka iyagoo sidoo kalena daawaday ciyaartii ugu dambaysay NBA-da ee ay koobka ku qaadday Golden State Warriors.
Xiddiga reer Brazil ayaa waxa uu £10.8 milyan oo Gini ku iibsaday diyaarad nooceedu tahay Embraer Legacy 450, lama se hubo in ay tahay diyaaraddan midda qasabka lagu dejiyey iyo in kale.